Fahad iyo Farmaajo waxa ay billaabeen fowdo siyaasadeed | KEYDMEDIA ENGLISH
Fahad iyo Farmaajo waxa ay billaabeen fowdo siyaasadeed
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, waxa ay qaadi doonaan, tallaabo kasta, oo ay uga hor tagayaan in dhaarin Xilidhibaan dhacdo 14-ka bishaan, waxayna hadda wadaan abaabul ciidan, xilli Farmaajo, uu xilalka ka xuyuubiyay saraakiil ciidan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo iyo Fahad Yaasiin hoggaamiyaan, ayaa billaabay hurinta qalalaaso siyaasadeed oo hor leh, si aysan u qabsoomin dhaarinta xildhibaannada labada gole ee ilaa hadda dooran.
Waxa ay qalalaaso ka dhex abuureen Guddiga Doorooyinka heer Federal, kadib markii FEIT diidday in ay aqoonsato natiijada doorashadii kursga, HOP086, ee Fahad Yaasiin, ka soo boobay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Haddii qorshahaan u meel mari waayo, waxa ay ka hadalsiin doonaan, Madaxweynaha KGS, Lafat-gareen, kaas oo inta badan Xildhibaannada ka soo baxay maamulkiisa, ka hor istaagi doona in ay 14-ka April 2022, qaataan sahaadada Xildhibaannimo.
Mar kale, haddii qorshahaas u meel mari waayo, oo Lafta-gareen ku fashilmo xakameynta Xildhibaannada Koofur galbeed, waxa ay qaadi doonaan tallaabadii ugu danbeysay, waxayna abuuraan qalalaaso amni, oo caasimadda gilgila.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble, iyo Guddiga doorashooyinka heer Fedraal, ayaa sheegay in ay ka go’an tahay, in Baarlamaanka 11-aad la wareegaan masuuliyaddooda, si waddanka looga badbaadiyo marxaladda adag.
RW Rooble, wuxuu taageero xooggan ka heystaa, Wakiillada Beesha Caalamka, Siyaasiyiinta Mucaaradka iyo inta badan bulshada Soomaaliyed, wuxuuna dhawaan ballan qaaday in dhaarita xildhibaannadu dhaafi doonin 14 bishaan.
Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug, Axmed Macallin Fiqi, ayaa ka mid ah shaqsiyaad muujinaya in Farmaajo u istaagay hurinta qalalaaso hor leh, xilli kaliya 13 cisho ka dhiman tahay in la soo af-meero hannaanka doorashooyinka ee daba dheeraaday.
“Kooxdii maafiyada ahayd waxay u soo jeesteen dalka in ay geliyaan fowdo, carqaladaynta doorashada iyo xasiloonidarro waxayna hadda adeegsanayaan waraaqihii guddiyada doorashooyinka oo been abuur ah”, ayuu yiri Fiqi.